Nokia ၏တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က HMD Global Oy Nokia ဖုန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့အောင်ပွဲခံပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူတို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ထဲတွင် Nokia 8 အားလုံးမှာထင်ရှားပါတယ်ကုမ္ပဏီ၏ခေတ်သစ်၏ပထမဆုံးအဆင့်မြင့်။
သူပြန်လာတာကအောင်မြင်မှုဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းချန်နယ်မှတဆင့်ရောင်းရန်လောင်းရသည်။ ၎င်း၏မဟာဗျူဟာကတည်းကကွန်ယက်အော်ပရေတာလက်လီရောင်းချသူများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကတည်းက။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Nokia အွန်လိုင်းစတိုးကသူ့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျယ်ပြန့်စေတယ်။ စပိန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံအသစ်များသို့ရောက်ရှိပါ.
La စတိုးဆိုင်ဥရောပနိုင်ငံများတွင်ရောင်းချခံရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းများကိုပိုမိုစျေးကွက်များတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အွန်လိုင်းစတိုးဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုစျေးကွက်အသစ်များတွင်အတည်ပြုလိုက်သည်။ ဘယ်စျေးကွက်လဲ။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ ပိုလန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စပိန်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
La Nokia ၏အွန်လိုင်းစတိုးရောက်ရှိလာခြင်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများကို ၀ ယ်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူလာမည်။ သို့သော်ဖုန်းများအားလုံးကိုအစကတည်းကမရရှိနိုင်ပါ။ သာရွေးချယ်ထားသောမော်ဒယ်များဖြစ်လိမ့်မည်။
Nokia 3, Nokia 5, Nokia6နဲ့ Nokia 8 တို့ဟာဖုန်းတွေရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ဒီနှစ်ဖြန့်ချိသော 3310 ကိုခရစ်စမတ်ကင်ပိန်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သေးသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အစကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းရွေးချယ်မှုဖြင့်ဖုန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုဖုန်းဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှexpandကန်အမှန်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်။
အမှတ်တံဆိပ်၏အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့်ဝယ်ပါ အားသာချက်များကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ကတိပေး။ သူတို့တွင် အခမဲ့ရေကြောင်း, 14 ရက်အတွင်းပြန်လာပါ မေးစရာမေးခွန်းများမရှိပါ၊ ၃ သို့မဟုတ် ၅ ကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များတွင်၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဖုံးအုပ်ပေးသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးအမိန့်လုပ်နေကြသည် နိုဝင်ဘာ ၂၀ မတိုင်မီ.
၎င်းသည်ပရိသတ်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည် ဖင်လန်ကုမ္ပဏီထံမှဖုန်းများ။ ဤတိုင်းပြည်များမှပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ယခု ပို၍ လွယ်ကူလာသည်။ စပိန်နိုင်ငံသို့ Nokia ရောက်ရှိခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုထင်သနည်း။ သင်ဆိုင်သို့သွားနိုင်သည် ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nokia ၏အွန်လိုင်းစတိုးသည်စပိန်သို့ရောက်ရှိသည်
Android အတွက် YouTube သည် HDR ပါ ၀ င်မှုအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုပြန်လည်ကျဆင်းစေသည်